Naya Post Nepal | रबि लामिछाने र ऋषि धमलाको तस्बिर देखाएर थ’र्का’उदैं हिड्ने को हुन यी न’क्क’ली पत्रकार ?
रबि लामिछाने र ऋषि धमलाको तस्बिर देखाएर थ’र्का’उदैं हिड्ने को हुन यी न’क्क’ली पत्रकार ?
झापा । आफुलाई एबिसी न्यूजको पत्रकार भन्दै न’क्क’ली पत्र’कारले थ’र्का’उदैं हि’ड्ने गरेको पाइएको छ । झापा हल्दिबारीका स्वामी नितेश ओलीले आफुलाई एबिसी न्यूजको पत्रकार भन्दै अरुलाई थ’र्का’उ’ने गरेको पाईएको हो। भ’ष्ट्रचार ठगि भण्डाफोर र पी’डि’तलाई मल्हम लगाउने काम गर्दै आएका उर्लाबारीका पत्रकार कि’शोर श्रेष्ठलाई उनले फोन गर्दै अ’न्टसन्ट भनेका थिए ।
स’क्कली पत्रकार किशोर र नक्कली पत्रकार नितेश आमनेसामने भएका हुन्। त ठगी भएको मान्छेको न्याय दिलाउन लाग्ने को हो भन्द’ै उनले गाली गरेका थिए । ‘मलाई चिनेको छेस म पनि मिडियाको मान्छे हो, जो सुकै ठगिउन तलाई के चासो ? नितेशले यहाँ उल्लेख गर्न नसक्ने शब्द प्र’योग गर्दै भने’का छन् ।
यस विषयमा हामीले उनलाई सम्पर्क गर्दा आफ्नो फोन खेतालो गोठालो बोक्ने र ट्याक्टरमा काम गर्ने भाईको भएको बताए । त्यसपछि पुनः तपाई र किशोरको कुरा के हो भन्दा आफ्नो दाई बारे समाचार आउन आटेपछि फोन गरेको बताए ।
उनले भने, म पनि टप टेन मिडियामा मै काम गर्छु भन्दै हामीबिरुद्ध नै खन्निए । कुन मिडियामा काम गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा भने, के कागच लेर आउ त को होस खाते समेत भन्न भ्याए । उनको स्वर सुन्दा सायद उनी नशामा रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
झापामा समाजिक काम गर्ने सामाजिक अभियान्ता भनेर चिनिएका नितेशले बोलेका शब्द र आफुलाई मिडियाकर्मी भन्दै थ’र्काउनुले सामाजिक काम माथि नै धज्जी उडेको छ । झापाका केही पत्रकारहरुलाई उनको बारेमा बुझ्दा उनी पत्रकार नभएको बताइएको छ । एक पत्रकार भन्छन्, बोक्रे सामाजिक अभियान्ता हो । त्यो लुकेर हिँड्छ। भेटेभने धेरैले पड्काउछन त्यसलाई ।
नितेश झापा प्रहरीले बहुविवाह गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । छुद्र व्यवहारका ओलीले ४ वर्ष अघि बिर्तामोड २ कि एक युवतीसँग विवाह गरेका थिए । विवाहपछि विभिन्न समस्या झेल्दै आएकी श्रीमतिसँगको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलिरहेको बेला ओलीले फेरि इलाम चुलाचुलीकी एक युवतीलाई श्रीमतिको रुपमा भित्राएका छन ।
बहुविवाहको जोहरी परेपछि स्थलगत अध्ययन गरेर दोस्रो श्रीमति ल्याएको पुष्टि भएपछि प्रहरीले ओलीलाई पक्राउ गरेका थियो । कथित अभियान्ता हुँदै घुमिरहेका ओलीले पहिलो श्रीमतिको आफन्तहरुलाई फेसबुकबाट मनपरी लेख्ने, गा’लीगलौ’ज गर्दै ध’म्की दिने गर्थे ।
ओलीलाई चारपाने क्षेत्रका युवाले धा’कध’म्की दिएको भन्दै कु’टपि’ट गरेका थिए । कु’टपि’टका क्रममा ओलीले बहुमुल्य सामान र नगद् समेत चोरी भएको आरोप लगाउदैं उजुरी दिएका थिए । सो उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा ओलीले झुटो आरोप लगाएको पुष्टि भएको थियो ।
सो घटना जिल्ला प्रशासनमा पुगेको थियो । सोही बेला ओलीले सामाजिक सञ्जालमा सिडियोलाई मनपरी समेत लेखेका थिए । सिडियोमाथि मनपरी लेखेको भन्दै प्रहरीको निगरानीमा परेका ओली केहि महिना फरार भएका थिए । उनलाई सम्झाएर सम्झिने मान्छे नै होईन, एक पत्रकार भन्छन्, फेसबुकमा जे मन लाग्यो त्यहि लेख्ने, मानमर्दन गर्ने, कमजोर मान्छेसँग आइलाग्ने उस्को झापामा दुले चोर जतिको पनि इज्जत छैन्। अहिले पनि लुकी लुकी हिड्छ ।
एविसी न्यूजले झापामा आफ्नो सम्बाददाता पार्थ मण्डल मात्र भएको बताएको छ । यता नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीले नितेश ओली नाम गरेको महासंघमा सदस्य कोही नभएको बताए ।- इताजाखबर बाट
२०७८ माघ ८, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 114 Views